Classical Mere Profile, Architectural Mere Profile, Waterproof Mere Profile - Sunjie
adịghị adị n'ịnyịnya
ịrị nọkwasịrị n'ịnyịnya na
Ft nọkwasịrị n'ịnyịnya na
Free Samples Testing 10 Years ahụmahụ ikanam Profaili Ọtụtụ narị ụdị n'ihi oke Low price, elu mma. 5-7-arụ ọrụ ụbọchị nnyefe
Standard Max 3M n'ogologo, ahaziri ogologo dị. Clear / Frosted / Milky Cover diffuser maka oke. Silver anodized, na-acha ọcha ntụ ntụ ntekwasa, nwa anodized dị. OEM imewe na-dịnụ.
OA, RoHS mma, 5 afọ akwụkwọ ikike Elu àgwà 6063-T5 Aluminium alloy dị polycarbonate ihe n'ihi na cover diffuser
Sunjie Technology Co., Limited e hiwere na 2013, Ebe ọ bụ na oruru, ụlọ ọrụ a lekwasịrị anya elu-ọgwụgwụ linear ọkụ usoro tinyere nnyocha, mmepe, mmepụta na ahịa. The ngwaahịa na-ọtụtụ-eji elu-ọkwa hotels, elu-ọgwụgwụ azụmahịa ezigbo ala na ụlọ, ụlọ ọrụ ọkụ na ọtụtụ nke ndi nkiti ebe. Enwe a elu aha na Europe na United States. The ika bụ a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke architects, ọkụ na-emepụta họọrọ ọkachamara ọkụ brand.After afọ nke unremitting mmepe, na oru oma management, R & D ike na mmepụta akọ.